Ọkara Ndụ Ndụ: Enweghị Bootstrap
Mọnde, Febụwarị 28, 2011 Monday, March 7, 2011 Nick carter
Ọ ga-amasị m ịkwụsị ụdị asịrị ole na ole. Anaghị m emegide ya ndị isi ego. Echeghị m na ndị na-etinye ego mmụọ ozi bụ ndị mmụọ ọjọọ. Echeghị m na onye ọ bụla kwesịrị ma ọ bụ ọbụna nwere ike "bootstrap" azụmaahịa ha nke ọma. Iji gosi ya, ọ ga-amasị m ịgwa gị gbasara ihe kpatara # 1 na gị na ndị mmekọ gị nwere ike ịmalite ịhere na-akwalite echiche azụmahịa gị nke ọkara na onye ọ bụla nwere ego iji chekwaa: Ọkara Ndụ.
Dị nnọọ ka okwu ahụ bụ “mmalite” abụrụla otu ihe isi ego, ya mere ọ bụrụla otu ihe na “techie”. Ikekwe enwere njikọ n'ebe ahụ. Ihe ndị mmadụ kwenyere n'ozuzu ya bụ na mbido ọhụrụ na-abụkarị ngwa weebụ, ahụmịhe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ kọmputa dabara na isi ntụtụ. Ugbu a, nke ahụ abụghị eziokwu mgbe niile. Mana, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, mgbe ahụ aga m agba nke m akwụkwọ ma kwuputa na mbido ọ bụla (na-ahụ ka ha si arụ ọrụ niile) kwesiri ịkpụzi olu ha na VC ma nwee ọrụ n'aka.
Teknụzụ bụ ubi na-eto ngwa ngwa. Enwere m olileanya na nkwupụta ahụ adịghị eju onye ọ bụla anya. Iwu Moore na-agwa anyị na teknụzụ na-eme kwa afọ abụọ ọ bụla (ihe ọ bụla ọ pụtara). Mana ọsọ ndị mmalite kwesịrị ichebara abụghị ọsọ nke ndị na-arụ ọrụ na-emeziwanye ma ọ bụ ọnụ ahịa RAM na-ada. Ọsọ ọsọ nke mmalite metụtara nka na ụzụ kwesịrị ka ọ gbasata ya bụ ọsọ ọsọ nke echiche ha tufuru ihe ọhụụ. Ọ bụ ọsọ ndụ ọkara mmalite.
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwaahịa, nwee nkụda mmụọ, ma chee ụzọ ị ga - esi mee ya nke ọma, mgbe ahụ enwere ọnụego ị ga - ekpebi: Ogologo oge ole ka ọ ga - ewe m iji wuo ngwaahịa a, gaa ahịa, wee wuo a dị oke egwu? Mgbe ahụ, jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-echebara echiche ahụ. Ọfọn! Ọ dị onye ga-eche na ị mezuru ọrụ nke nhicha VHS ma ọ bụrụ na ọ were gị afọ iri iji nweta oke ahịa? Onwere onye ga - echebara ihe a na - emegharị emegharị anya - waya-acha anụnụ anụnụ n’abalị? Ndị a bụ teknụzụ ndị meriri, ọ bụghị site na ndị asọmpi ọ bụla, kama ọkara ndụ. N'ọsọ ịgba ndị mmadụ egwu, ha furu efu.
Mgbe á »na-ere ahá» ‹a technology, M na-eche na m nwere ike n'enweghị nsogbu na-ekwu na" na-eleká »ta ndá» ‹bá» some nke nke uzu okwu ubochi a. Na-elekọta mmadụ na-blindly ngwa ngwa. Ndị mmadụ na-agbanwe kwa ụbọchị. Na, n’agbanyeghi ihe omuma nke “nje” na agbasa echiche, ndi mmadu na-efu ego, kwa. Ọha anaghị akwụ ụgwọ. I nweghi ike ichoputa ihe omuma mmadu n'enweghi ike some obughi ngwa ngwa. Ọsọ, ka emechara, bụ aha egwuregwu.
Yabụ, olee mgbe ị na-enweghị ike bootstrap ọ? Ọ bụrụ na e wuru ngwaahịa gị na ntanetị (Twitter ma ọ bụ Facebook) nweta ego. Ọ bụrụ na teknụzụ gị dabere na adịghị ike ọzọ (dị ka ndị na-ehicha isi ma ọ bụ usoro enweghị aka) ga-enweta ego. Ọ bụrụ n ’ụjọ na-atụ ịgwa onye ọ bụla gbasara echiche gị (itinye ego nke ndị itinye ego) maka na ị na-atụ ụjọ na ha ga-ezuru ya, were nweta ego. Chọpụta ihe, ị ga-agwa mmadụ n'oge na-adịghị anya iji nweta ndị ahịa, ma ọ bụrụ na ọ dị mma, onye ọzọ ga-edepụta ya ma jiri ya VC ịgbaso gị ọsọ ọsọ gaa n'ahịa na ọsọ gafere gị n'ahịa ahịa. Ọ bụrụ na ọsọ nwere ike ịkụ gị, mgbe ahụ ịkwesịrị ịnwe ọsọ ọsọ.
Google Kwadoro, Ndị Spammers Na-aga Facebook